दाजुभाईलाइ टिका लगाएर डिउटी हिडेकी मनिषाको बाटोमै मृ* त्यु, अफिस पनि पुग्न पाईनन् - Onlines Time
दाजुभाईलाइ टिका लगाएर डिउटी हिडेकी मनिषाको बाटोमै मृ* त्यु, अफिस पनि पुग्न पाईनन्
तुलसीपुरस्थित रेडियो हाम्रो पहुँचमा कार्यरत प्राविधिक मनिसा लामिछानेको सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ विजौरीबाट तिहारको टिका लगाएर रेडियोको काममा आउँदै गरेकी २२ वर्षीया मनिसा सवार मोटरसाइकललाई स्कार्पियोले ठक्कर दिएको थियो ।
तिहारको टिका पछि उनका दाजु २४ वर्षीय दाजु विराज लामिछाने बहिनीलाई रेडियोसम्म छोड्न मोटरसाइकलमा आउँदै थिए। सोमबार दिउँसो साढे १२ बजेतिर तुलसीपुर ६ स्थित रेडियोको जाने चोकमै दाजु बहिनी सवार रा १ प ६७२१ नम्वरको मोटरसाइकलबाट लु अ.अ. क. ३९४६ नम्बरको स्कार्पियोले ठक्कर दिएको थियो। दाजुबहिनी विजौरीबाट तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेका थिए भने स्कार्पियो पूर्वतर्फ जाँदै थियो।
गम्भीर घाइते दुबै दाजु र बहिनीलाई तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार पछि थप उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा थप उपचारका लागि रिफर गरिएको थियो। उपचारको क्रममा मनिसाको बेलुका साढे ५ बजे मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी शिव बहादुर सिंहले जानकारी दिए।
उनका दाजु विराजको कोहलपुरमा उपचार भइरहेको डिएसपी सिंहले बताए। स्कार्पियो चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
चाडबाडका दिन काममा जान मन त कसलाई हुन्छ र! जागिरे भएपछि नगई पनि नहुने, त्यसमा रेडियोको जागिर। प्राविधिकविना रेडियो बज्दैन। रेडियो बन्द गर्नु पनि भएन। कोरोना महामारीका कारण झनै यसपालि अवस्था फरक छ। देउसी भैलो खेल्न पाइएन। गाउँघरमा रेडियोले भट्याएको सुनेरै देउसी भैलोको नियास्रो मेट्नु पर्ने अवस्था बन्यो।
त्यही जिम्मेवारी पुरा गर्न २२ वर्षीया मनिसा लामिछाने सोमबार ‘रेडियो हाम्रो पहुँच’को कार्यालय जाँदै थिइन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१९ बिजौरीको घरबाट बहिनीलाई रेडियोसम्म छोड्न विराजले मोटरसाइकल चलाए। सोमबार दिउँसो साढे १२ बज्दै थियो। उनीहरू रेडियो जान चोकबाट घुम्दै थिए। तुलसीपुर बजारबाट बत्तिएर आएको स्कार्पियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो।
तुलसीपुर-घोराही सडकको गुल्म चोकमा दाजु बहिनी लडे। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पूर्वबाट आएर चोकमा घुमिसकेको रा १ प ६७२१ नम्वरको मोटरसाइकललाई विपरीत दिशातर्फ गइरहेको लु. अ . अ .क ३९४६ नम्बरको स्कार्पियोले पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो।
उपचारकै क्रममा सोमबार दिउँसो साढे ४ बजेतिर मनिसाको मृत्यु भयो। उनका दाजु विराजको अहिले पनि कोहलपुरमै उपचार भइरहेको छ। खुसीले चाड मनाइरहेका लामिछाने परिवार अहिले शोकाकुल छ।
प्रहरीका अनुसार स्कार्पियो चालक १९ वर्षका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने चालकसहित स्कार्पियो प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिए। क्षतिपुर्तिबारे मंगलबार बिहान इप्रका तुलसीपुरमा छलफल भएको सिंहले बताए। श्रोत सेतो पाटि
Prevरमेश प्रसाई र कल्पना दाहाललाई आमाले दिइन् विवाहको स्वीकृति, कल्पना लाजले भुतुक्कै (भिडियो हेर्नुस्)
Nextमानहुँकोट जाँदै गरेको माइक्रो दुर्घटना : एकको मृत्यु, पाँच घाइते